नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गर्‍यो मेक ईन नेपाल अभियान | Business TV Nepal
नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गर्‍यो मेक ईन नेपाल अभियान
नेपाल उद्योग परिसंघले मेक ईन नेपाल अभियान सुरु गरेको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका विच प्रधानमन्त्री के. पि शर्मा ओलीको हातबाट सिएनआईले सो अभियानको उद्घाटन गराएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले मेक ई नेपालको लोगो समेत सार्वजनिक गरेका हुन् । भारतमा मेक ईन ईन्डिया अभियान सुरु भएयता उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना भएको र धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्रिएका सन्दर्भमा नेपालमा पनि निजी क्षेत्रबाट सो अभियानको थालनी भएको हो ।
अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मेक ईन नेपाल अभियान निजी क्षेत्रले सुरु गरेको भए तापनि सो अभियानको अपनत्व सरकारले समेत लिने उद्घोष गरे । विभिन्न कच्च पदार्थहरु विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अहिले मेक ईन नेपाल अभियान हाफ मेक ईन नेपाल मात्र हुने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । आधाभन्दा बढि कच्च पदार्थ तथा मेसिनरी हरु विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्था भएकाले नेपाल कच्च पदार्थमा पनि आत्म निर्भर बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत थियो । कार्यक्रममा अर्थविद् तथा सिएनआईका आर्थिक सल्लाहकार डा. विश्व पौडेलले नेपालको समग्र उद्योगहरुको अवस्था र औद्योकरणका लागी नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै सिएनआईका अध्यक्ष सतिश मोरले मेक ईन नेपाल अभियानको लक्ष्य सम्बृद्ध नेपाल रहेको र त्यसमा सरकारको सामान्य मात्र सहयोग रहेपनि निजी क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हा“सिल गर्ने बताए ।
त्यसैगरि उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकार प्रधानमन्त्री के.पी ओलीको भिजन अनुसार दु्रततर औद्योगिक विकासमा लागिरहेको र सोही मुताविक काम भईरहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सिएनआईका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालमा पछिल्लो समय सरकारले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न उल्लेय काम गरेको भन्दै मेक ईन नेपाल अभियानले सरकारलाईं थप सहयोग पुग्ने बताए । पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक बहस र औद्योगिक विकासका लागी निजी क्षेत्र तथा सरकारी तहबाट विभिन्न प्रयासहरु भईरहेका छन् । यसैसन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गरेको मेक ईन नेपाल अभियानले नेपाली उत्पादनको उपभोक्ताहरु बढ्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप बजेट ल्याए आर्थिक विकास सहज हुने सरोकारवालाहरुको भनाई
केटीएमको एड्भेन्चर सार्वजनिक